राज्यको विलोपीकरण – बबई न्यूज
बबई सम्बाददाता२३ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०७:३२
अर्जुन सुवेदी¸ बर्दिया
संसारका हर चिज गतिशिल छन् । जीवन फेरिन्छ¸ उत्पादन शक्तिहरु बढ्दछन्¸ पुराना संबन्धहरु खतम हुन्छन् । (समाज विकास क्रम कृष्णदास श्रेष्ठ¸ २०४७)
कार्लमाक्सः राज्य भनेको समाजकै आन्तरिक विकासको उपज हो । भौतिक उत्पादनमा भएको परिवर्तनको फलस्वरुपमा राज्य उदय भएको हो ।
एउटा उत्पादन पद्धतिको ठाउँमा अर्को पद्धती द्वारा राज्य व्यवस्थामा पनि परिवर्तन आउँछ । (थुप्रै उदाहरण र समाज विकास क्रमलाइ संझदा पुग्छ)
सधै राज्यको अस्तित्व थिएन । आदिम सम्यवाद युगमा जहाँ न ब्यक्तीगत स्वामित्व थियो¸ न वर्ग¸ न राज्यको अस्तित्व नै थियो । त्यहाँ समाजका ब्यक्तीहरुले छानेको ब्यक्तीद्वारा सामाजिक कार्य गर्दथे ।
उत्पादन शक्तिको क्रमिक विकासले आदिम साम्यवाद को बिकास सुरु भयो । ब्यक्तीगत स्वामित्व बर्ग देखा पर्यो ।
यो संगै ब्यक्तीको स्वामित्व अधिकार संरक्षण गर्ने नाउँमा राज्यको उत्पती र विकास भयो । समाज बर्गमा विभाजन भयो ।
राज्य भनेको केहो ?
बर्गिय समाजको उपज हो । बर्गको उत्पती संगै राज्यको पार्दुभाव भएको हो । बर्गको उन्मूलन पछी राज्य पनि विलाएर जानेछ । यो कुरा साम्यवादी व्यवस्थामा मात्र संभव छ ।
एउटा बर्गले अर्को बर्गमाथी अधिपत्य कायम राख्ने यन्त्र अर्थात राजनीतिक साधन नै राज्य हो ।
उत्पादनका साधनमा अधिकार राख्ने बर्गले राज्यको रुपमा उत्पीडीत तथा शोषित हरुलाइ दवाउने गर्दछ । तो बर्गले राज्यको शक्तिको संरक्षणका लागि संपुर्ण तागत प्रयोग गर्दछ ।
राज्य प्रमुख लक्ष्यणः
यसले संपूर्ण जनताको नभएर सतारुढ बर्गकै हितमा मात्र अभिव्यक्ती दिन्छ । सेना पुलीस कर्मचारी, न्यायलय¸सबै सत्तारुढ पक्षकै हुन्छन् ।
बर्गिय अन्तरविरोध तिव्र हुँदै जाँदा सत्तारुढ सेना पुलीस राज्यकै अङ्ग मजबुद पार्ने राज्यकोषको खर्च गर्ने आम श्रमजीवी जनसमुदाय माथी खर्च भार थोपर्ने ।
शोषण मूलक राज्यको कार्यः
दाश युग¸सामान्तवादी र पुँजीवादी समाजमा राज्य जसरी बर्गिय हिसावले सत्तारुढ बर्गको हित गर्छ । ठिक त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि आफ्नो बर्गको संरक्षण पृष्टपोषण गर्ने नै शोषण मूलक राज्यको कार्य हो । आन्तरीक र वाहय रुपमा श्रमजीवी वर्ग माथी अन्याय अत्याचार कायम गरि रहन्छ ।
राज्यले कुन बर्गको सेवा गर्दछ । कुन आर्थिक आधारमा तो खडा भएको छ । भन्ने कुरामा ध्यान राखेर नै राज्यको प्रकार छुट्याइन्छः
दासप्रथा राज्य सत्ता
सामान्तवादी राज्य सत्ता
पुँजीवादी राज्य सत्ता
समाजवादी राज्य सत्ता
साम्यवादी राज्य सत्ता
जनप्रतिनिधि मूलक गणतन्त्र
सैनिक शासन (शब्द परिचय गोपी रमण उपाध्याय)
दासप्रथात्मक समाजमै प्रशासनका विभिन्न रुपहरु देखा परिसकेका थिए । कुनै सम्राट¸ राज्यतन्त्र¸ निर्वाचित शासनको रुपमा गणतन्त्र¸ कुलीनतन्त्र¸ प्रजान्त्र आदी । प्रशासनका रुपमा यस्तो भिन्नता भए तापिन दासप्रथात्मक नै हुने गर्थो
(दर्शनशास्त्रको प्ररम्भिक ज्ञान¸ पृ.३४३)
समाज विकासको साथसाथै राज्यका प्रकार रुपहरु बदलीदैँ गएपनि शोषण मूलक स्वभावमा परिवर्तन भएन ।
शोषणको रुप बदलियो¸ शोषण कायम रह्यो ।
पुँजीवादी युगमा पनि केही वुर्जुवा सिद्धान्तकार¸आधुनीक सुधारवादीहरुले पुँजीवादी शासनको पक्षमा गरेका वकालत¸ समानता¸ प्रगतिशिलता वारे जति तर्क गरे पनि निराधार र अबैज्ञानिक तर्क थिए । किनकी यो पुँजीवादी अधिनायकत्व भएको शासन ब्यवस्था हो । यसले आम जनताको हित गर्न सक्दैन । बरु शोषित पिडित मजदुरलाइ एक ठाउँमा उभीन बाध्य बनाउँछ । बर्ग संघर्ष र अन्तर संघर्ष पैदा गर्न मद्धत गर्दछ ।
सर्वहारा बर्गको अधिनाकत्व भएको राज्य व्यवस्था ।
लेलिनले भन्नु भएको छः
शहरिया तथा सामान्य मजदुरले मात्र पुँजीवादी जुवावाट मुक्तीको लागि संघर्षमा संपूर्ण श्रमीक समुदाय तथा शोषित जनताहरुलाइ नेतृत्व दिने क्षमता राख्दछन् ।
समाजवादी आन्दोलनको लागि मजदुर बर्गले नेतृत्व गर्दछ । जसको साथमा कम्युनिष्ट पार्टी रहन्छ ।
सर्वहारा बर्गको अधिनायकवाद नै माक्सवादको मुख्य सिद्धान्त हो । सर्वहारा बर्गले मात्र पुँजीवादको अन्तगरी समाजवाद स्थापना गर्दछ । (रुस)
पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त गरी बर्गरहित साम्यवादी समाजको स्थापना गर्ननै सर्वहारा बर्गको महान एतिहासिक कार्य हो
तर साम्यवाद पुँजिवादबाट सोझै उत्पन्न हुँदैन ।
पुँजिपति बर्ग¸ विश्व समाजवादी¸ सुधारवादी¸ संसोधनवादी विचको खिचातानीमा माक्सवादी पार्टीको नेतृत्वमा हुने सर्वहारा बर्गको क्रान्ती वाट मात्र समाजवादमा प्रवेश गर्न सिकन्छ ।
बेलाबेलामा हुने पुँजीपति बर्ग संगको प्रतिरोधको सामना गर्ने र प्राप्त उपल्बद्धीको रक्षा गर्दै उच्च समाजवादी बाटो अवलम्बन गर्ने ।
लेलिन भन्नु हुन्छः
सर्वहारा अधिनायकत्व भनेको अति शक्तिशाली दुस्मनको विरुद्ध भीषण युद्ध हो । किनभने आफ्नो पतन पछि यस बर्गको प्रतिरोध दशौँ गुणा बढ्न जान्छ ।
(दर्शन शास्त्रको प्रारम्भी ज्ञान¸ पृ. ३५१)
दमनको लागि दमन सर्वहाराबर्गको लक्ष्य होइन । समाजवादी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु¸ आर्थिक क्रियाकलापलाइ तिव्रता दिनु । समाजमा रहेका तमाम विभेदको अन्त गर्नु हो ।
पुँजीवादमा भन्दा उच्च स्तरीय श्रमको सामाजिक संगठनको निमार्ण गरी सर्वहारा राज्यको लक्ष्य प्रप्ती गर्ने ।
उत्पादनका साधनको राष्ट्रियकरण गर्ने ।
श्रम केन्द्रित शैक्षिक कृयाकलाप ।
साम्राज्यवादि सित प्रतिरोध हुने परराष्ट्र नीति ।
आफ्नो शैन्य शक्ति सवल बनाउने ।
किसान मजदुरको एकता कायम गर्ने ।
शहर गाउँको एकता कायम गर्ने ।
किसान मजदुर बर्गको प्रतिनिधिको हातमा देशको आर्थिक¸ सामाजिक¸ राजनैतिक¸ सांस्कृतीक जीवनको नेतृत्व प्रदान गर्ने ।
राज्यका सवै शक्ति¸ स्रोत श्रमिककै मातहत रहने ।
राज्यको विलोपिकरण भनेको राज्य निस्कृय हुनु । कुनै खालको भूमिकामा नरहेर जनताबाट निर्मित संगठनमै एकाकार हुँदै जानु हो ।
राज्यको विलोपिकरण भनेको राज्यको मरणावस्था हो । जुन अबस्थामा उसको भूमिका क्रियाशिलता रहँदैन ।
राज्य त्यसबेला नै पूर्ण रुपमा मर्न सक्छ जुन बेला प्रत्येक बाट उसको योग्यता अनुसार र प्रत्येकलाइ उसको आवश्यक्ता अनुसार भन्ने नियम समाजले जीवनमा लागु गर्दछ ।
(दर्शन शास्त्रको प्रारम्भी ज्ञान)
समाजवादमा आएको आर्थिक सामाजीक राजनैतिक समानताले मानिसको सोच ज्ञान उच्चतम तिर बढ्दै गइ क्रान्तीको माध्यमबाट समाजवादको बाटो तय हुन्छ ।
समाजवादी राज्य व्यवस्थाको विकासले विस्तारै विस्तारै साम्यवादी शासन तर्फ डोरयाइ रहेको हुन्छ ।
विस्तारै व्यवसायीक संस्था¸ सहकारीहरु श्रमीक¸ किसानका संस्थाको संयुक्तीकरण हुँदै जान्छ ।
देशभक्त क्रान्तिकारि विच धुर्वीकरण हुन्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीले तत्कालिन कार्यभार मध्यकालिन दिर्घकालिन कार्यनीति र रणनीति ठोस गर्दै जान्छ ।
जनवादि गणतन्त्रका लागि बैज्ञानिक समाजवादी सत्ताका लागि क्रान्तिको उद्घोष गर्दै तुफानि क्रान्तीको कारण साम्यवादमा प्रवेश ।
साम्यवादी सत्ताका चरित्रः राज्य विलोपीकरणको अबस्था
सवैखाले बर्गिय विभेदको अन्त असमानताको जालो फ्याकिने ।
समाज विकासको अन्तीम चरण ।
समाजमा कुनै खालको शोषण नहुने ।
बर्ग विहिन समाज ।
समतामूलक उत्पादन संबन्ध ।
ब्यक्तिगत पुँजीको अन्त ।
मानिसमा उच्च चेतना ।
मानवताको पूर्ण सम्मान ।
राज्यका अंग विस्तारै निस्कृय हुँदै जाने र राज्य विधि बसाउने साधन मात्र बन्दछ । विस्तारै विस्तारै राज्य सामाजिक संरचनामा रुपान्तरीत हुँदैजान्छ ।
सामाजीक स्वशासननका माध्यमबाटै सारा सदस्यले आफ्ना आर्थिक सामाजिक जीवन संचालन गर्ने । राज्य मरणावस्थामा पुग्नेछ ।
जुनबेला समाज स्वशासनका लागि पुर्णतय परिपक्व हुनेछ । अर्थात विकसित साम्यवादको अबस्थामा समाज पुग्दछ । त्यसवेला राज्यको कुनै आबस्यकता रहँदैन ।
हरेक ब्यक्ती स्वच्छपूर्वक नै आफ्नो योग्यता अनुसारको काम गर्नेछन् ।
जनता शासक सबैमा बैज्ञानिक नियम लागु हुने ।
कुनै एक देशमा मात्र साम्यवादको विजय भयो तर संसारमा अझै पनि पुँजिवादीहरु अस्तित्वमा रहेका देशको बाट प्रतिरक्षाका लागि राज्यका अंग कायमै रहने हुन्छ । जतिबेला सम्म तमाम प्रतिकृयावादी साम्राज्यवादी शक्तीहरुको तर्फबाट हमलाको खतरा पूर्ण रुपमा नै विलाएर जानेछ । तब मात्र राज्य विलोपी करण तर्फ जानेछ । अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्रमा पनि समाजबादको विजय र सुदृढ हुन जरुरी छ ।
समाज विकास क्रमिक रुपमा अगाडी बढ्दै जाँदा यसको उच्चतम रुप साम्यवाद हो ।
समाजवादी शासन व्यवस्थाबाट विकसित सामाजीक¸ आर्थीक¸ राजनैतिक संस्कारले मानिसमा सामनता¸ बर्ग विचको विभेदको अन्तको थालनी ।
समाजवादमा सर्वहारा बर्गको नेतृत्व रहेको कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता चलाउने यसले साम्यवादको आधारशिला तयार गरी क्रान्तीबाट साम्यवाद प्रवेश गर्दछ ।
समाज विकासको अन्तीम चरण समाजबादमा शोषण विहिन¸ बर्ग विहिन¸ समतामूलक उत्पादन संबन्ध रहन्छ । ब्यक्तीगत पुँजी¸ सम्पत्तीको अन्त हुन्छ । मानिसका उच्चतम मानविय चेतना¸ नयाँ प्रवृधी¸ बैज्ञानी आबिष्कार¸ सामुदायिक उत्पादन पद्धती¸ समाजवादी सामाजीक नियम¸ हरेक स्रोत साधन, उत्पादनमा सामूहिक स्वामित्व रह्न्छ ।
राज्य विस्तारै सामाजीक संस्थासित एकाकर हुँदै राज्य विहिन अबस्थामा समाज पुग्दछ । यो नै राज्यको विलय/समाप्ती अर्थात विलोपीकरण हो ।
माक्र्स वादी दर्शनः मोहन बैध किरण ।
दर्शन शास्त्रको प्रारम्भीक ज्ञान ।
परिवार¸निजी स्वामित्व¸ राज्यको उत्पत्ती ।
समाजको विकास क्रमः कृष्णदाश श्रेष्ठ ।
राजनितिक शब्द परिचयः गोपी रमण उपाध्याय ।
समाचारहरुः साराखबर डट कम ।
सुवेदी, बढैयाताल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ।